जगदीश घिमिरे-, (काठमाण्डौ )
सबैलाई ख्वाइसकेर उब्रियो भने खानुहुन्थ्यो। उब्रेन भने 'आज मेरो बर्त' भन्नुहुन्थ्यो। आइतबार सूर्यको। सोमबार शिवको। मंगलबार गणेशको। हरेक बारका इष्टदेव छन्। तेसमाथि कैले एकादशी। कैले प्रदोष। भँडारमा सर्दाम र भान्सामा खाने नभएपछि आमाको बर्त हुन्थ्यो। भन्नुहुन्थ्यो, 'अर्को जुनी यस्तो नहोस्।'
म भन्थेँ, 'आमा, नयाँ नेपालमा त्यस्तो हुँदैन।'
'भो तेरो नयाँ नेपाल आयो नापेर! मेरो अर्को जुनीमा आउँछ!'
'यै जुनीमा नआए म तपैंको छोरै हुइनँ। आमा, नयाँ नेपाल तपैंको यै जुनीमा आउँछ। नयाँ नेपाल आएपछि तपाईंको कायाकल्प हुन्छ।'
'आमा बोल्नुस् न!'
'बोल्नुस् न आमा बोल्नुस्।'
आमा सकीनसकी बोल्नुभो, 'म बोलेर के, नबोलेर के? मेरो कुरा कल्ले सुन्छ र! मैले किन बिनसित्ति बोली खेर फाल्नु?'
बाले मेरी सौतेनी जेठी आमालाई उहिल्यै अलिअलि खेतबारी दिएर भिन्नु गराइदिनुभाथ्यो। सौतेनी दाजु दारा किटेर भन्थ्यो, 'यो बाउ भन्नेले हाम्लाई दिनु दुःख दियो। मेरी आमालाई घरबाट निकाल्यो। अंशमा मार्यो्। अन्याय गर्यो । यस पातकी बूढोलाई मैले जान्या छ!'
आफन्तले यशगान गरे- कटुवालकी बुहारी कस्ती लच्छिनकी! पैले ससुरो टोकी! पछि पोइ!
अनि भाउजुले आफैंलाई टोकी, भीरबाट हाम्फालेर मरी। भतिजी बिक्री भै। भतिजो इराकमा सेरियो।
शान्तिसम्झौता भयो। माओवादीले लुटेको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने भए। उनीहरू बोलीका पक्का हुन्छन्। गर्छु भनेपछि गर्छन्। मार्छु भनेपछि मार्छन्। मैले पत्याएँ। माओवादीलाई भनेँ, 'हाम्रो जग्गा फिर्ता देऊ।'
उसले भन्यो, 'हामीले तँलाई गाउँ नै फिर्ता दिएपछि त्यो नाथे जग्गाको के कुरा?'
उसले मलाई हाते बन्दुक ताकेर भन्यो, 'यी यो भनेको? हामीले तँलाई गाउँ फिर्ता दियौं भनेको। गाउँमा आउने जाने छुट दियौं भनेको। आफ्नु गाउँ मुठ्याएर बस्। बढी बोलिस् भने तँ सालालाई.....।'
उसको चालचलन र रवाफ देखेर मलाई तँ भन्ने आँट आएन। भनेँ, 'मलाई तपैंको बाँझो बारी अधियाँमा कमाउन दिनुस्।'
हाम्रा बिचल्लीका लामा कुरा भए। मैले उसलाई सधैं तपाईं भनेँ। उसले मलाई सधैं तँ भन्यो। अन्तमा भन्यो, 'के उँभो लाग्छस् तेस्तो नाथे बारी कमाएर! भोकै मर्छस्। मसँग काम गर्न लाग्। उँभो लाग्छस्।'
'वारपार गर्ने काम।'
'के वारपार गर्ने?'
''हातहतियार, ड्रग, स्म्याक, ब्राउन सुगर, गैंडाको खाक, कस्तुरीको बिना, बाघको हाड, भालुको पित्त, यार्सागुम्बा, जडिबुटी, डलर, रक्तचन्दन, जाली नोट, जाली पासपोर्ट, रातो पासपोर्ट, चेलीबेटी, चेलाबेटा, अपहरण, फिरौती। हामीसँग अनेक कारबार छन्। तँलाई जे मन लाग्छ, गर्। रोजेको दिन्छु,' उसले एकसासमा भन्यो। उसको प्रत्येक शब्दले मेरो आङ सिरिङ-सिरिङ पार्योअ।
सोधेँ, 'जिउज्यानमा कत्तिको खतडा छ नि?'
'जिउज्यानमा खतडा त छ। तर ज्यानमारा नै हाम्रा सहयोगी हुनाले खासै खतडा छैन।'
'को हुन् त ती?'
'जससँग बन्दुक छ, यहाँदेखि संसारभरिका। जसले बन्दुकको बलले राज्य गरिरहेका छन्। हेर, संसारमा दुईथरि बन्दुकको शासन छ। एकथरि सरकारी बन्दुक। अर्कोथरि अनेक विद्रोही र अपराधी बन्दुक। जंगी, निजामती हाकिम-बडाहाकिम, पार्टीका हाकिम, बडाहाकिम नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्री हामीलाई सबैको आशीर्वाद छ। हामी उनीहरूकै काम गर्छौं। सबैले आफ्नो ज्यान, सीप र ओहोदाको लगानी र औकातअनुसार बाँडीचुँडी खान्छौं। सानातिना पकडा सकडा र कारवाही त हात्तीका देखाउने दाँत हुन्। मसँग लाग्। जुनी सप्रन्छ। तैंले मेरो ज्यान जोगाएको काँ बिर्सन्छु! तैंले गर्दा बाँचेँ, तस्करहरूको राजधानी काठमान्डु आएँ र यो मेलोमा लागेँ। यो तेरो देन हो। तँ पनि मजस्तै लखेटिएको मान्छे होस्। म तँलाई मद्दत गर्छु।'
म अनकनाएको देखेर भन्यो, 'मकहाँ एक साता बसेर मेरो चमत्कार हेर्। अनि तँलाई जे मन लाग्छ, गर्।'
मैले एक साता उसको घरमा 'गाउँबाट आएको नयाँ वेटर' भएर दिनदिनै हुने रात्रिभोजमा साँझदेखि बिहान भाले बास्ने बेलासम्म काम गरेँ। मलाई कपाल काटेर र लुगा, जुत्ता फेरेर चिटिक्क पारे। वेटरको सोमत र हजुर, प्रभु र स्योस् को भाषा सिकाए। जंगी, निजामति र सबै राजनीतिक पार्टीका हाकिम, बडाहाकिम आउँथे। घरैमा यौटा भित्तामा सिनेमा हेर्ने चाँजो भएको ससानु पार्टी प्यालेस थियो। उनीहरू संसारका सबभन्दा महँगा मदिराका चुस्कीले रुसी माछाको फुल (क्याभियार), जापानको गाईको मासु (बिफ), नर्वेको माछा (साल्मन), बेलायतको दूधे बाछाको मासु (भिल) प्रतिबन्धित हरिनको सुकुटी र बँदेलका चौटा निल्थे। बम्बैको फिल्ममा नाच्ने गाउने भारत-सुन्दरीहरू ल्याएर पाँचतारे होटेलमा राख्थे र साथमा लिएर आउँथे। तिनका चुम्बनले आफ्ना ओठमुख चुठ्थे। ब्लु लेबल ह्विस्की, पाँचतारे ब्रान्डी, दुष्प्राप्य वाइनको मातमा निला सिनेमा हेर्थे र आफूहरू पनि निला पात्र बन्थे। रात्रिलीला सकेर मात्र दिवसलीलाको मेलोमा लाग्थे।
एक सातापछि मैले भनेँ, 'हुजुरको बाँझो बारी अधियाँ कमाउन दिस्यो भने मलाई पुग्छ। अरू केही चाहिँदैन।'
उसले भन्यो, 'थुक्क बुद्धि! तँ गुको किरो। गुको किरो गुमा नै रमाउँछ । त्यो खोरिया तँलाई सित्तै राजीनामा पास गर्दिन्छु। हे दुर्बद्धि, तैंले दुःख पाउँछस्। सहुन्जेल सही। असह्य भएपछि मलाई सम्झेस्। तेरो लागि मेरो ढोका सधैं खुला छ। तैंले मेरो ज्यान बचाको बिर्सन सक्तिनँ।' उसले मलाई बाटोखर्च भनेर राम्रै रकम दियो। म हच्किएँ। उसले भन्यो, 'यो देशमा ब्रह्मलुट छ। सरकारमा बस्नेले राज्य लुटिराका छन्। तेस्को बाछिटा मकहाँ पनि अलिअलि आइपुग्छ। तैंले धक मान्नुपर्दैन। लैजा।' मैले हात थापेँ। मलाई भाउन्न भो। थचक्क बसेँ। अनि उसको ज्यान बचाएको प्रसंग सम्झेँ।
मेरो सौतेनी दाजुले भन्यो, 'हेर कान्छा, मलाई तँसँग क्यै रिसराग छैन। म तँलाई माया गर्छु। तेसैले भनेको, तँ घर नबस्, तँ मसँग माओवादीमा लाग्। सन्तेलाई पनि लगा। यो गाउँका होनहार केटा तिमीहरू नै हौ।'
सानुराजा भएको सन्तेले बकस दिएको बारीको बाँझो फोरेँ। बाली लाएँ। अर्काको अधियाँ पालेको भैंसी मकहाँ दुई बेत ब्यायो। दुवै बेत पाडी पायो। मेरो भागमा यौटा पाडी आयो। सर्वस्व हरणपछि बल्लतल्ल सासको धन यौटी पाडी जोड्न सकेको थिएँ। त्यो ब्यायो। मोइ आफूले खाएर घिउ बेच्ने र यौटा बाख्री किन्ने सुर थियो। बाख्रीले जोर पाठा पाउन लागी भने अलि उँभो लागुँला कि भन्ने आस थियो। त्यै बेलामा आमाले खान छोड्नुभो। बोल्न छोड्नुभो। बसउठ गर्न पनि नसक्ने हुनुभो। आफन्तलाई देखाउन पनि अस्पताल लैजानै पर्योख।
अभर परेको देखेर गाउँका दयालुले मलाई यसरी छोपे जसरी दुवाली फर्काएर सुकाएको भँगालोमा माछा छोप्छन्। दयालुहरूले भने, 'बेच्छस् भने एक रुपियाँसम्म दिउँला। हुन त तेरो भैंसी तीन मोहर जाने हो। मसँग त्योभन्दा बढी रकम छैन। तेरो आमाको दया लागेर किनिदिन लागेको हुँ।'
त्रिशुलीको डरलाग्दो भेल! पानीमा आँखा पर्योल कि कहाली लाग्थ्यो। आमालाई तुइनमा झुन्ड्याएर आँखा चिम्लिनुस् भनेँ। आफू पनि झुन्डिएँ। फलामको डोरीको भरले तर्न लाग्यौं।
तुइन तरुन्जेल मैले उनीहरूका कुरा सुनेँ। हामी निमुखालाई देखाउँदै ती देशीविदेशी सहयात्री सेवकहरूलाई उसले भन्यो, 'हेर्नोस्, हामीहरूको देशको अवस्था यस्तो छ। हाम्रा जनताले त्रिशुली, कोसी, कर्णालीजस्ता नदी तुइनमा तर्नुपर्छ। यिनीहरू रोजगारी वा उपचारको लागि जान लागेका हुन्।'
विदेशी बडाहाकिमहरूले भने, 'त्यसैले त हामी छौं। हामी रिन दिन्छौं। धन दिन्छौं। तपाईं लिनोस्। आफू बन्नुहोस्। आफ्नालाई बनाउनोस्। हाम्रो जागिर खाइरहने मेलो बसाइराख्नोस्।'
'ठिक। प्रधानमन्त्रीले के गर्नुपर्छ?'
'हेलिकप्टर चढेर उद्घाटन। देश विकासको लागि त्योभन्दा ठूलो अर्को काम हुन सक्तैन,' हेलिकप्टर कम्पनी मालिकले भन्यो। सबै हेलिकप्टर कम्पनीमा जस्तै यस कम्पनीमा पनि हरेक प्रधानमन्त्री हुनेले पदेन हिस्सा पाउने बन्दोबस्त थियो।
'त्यो त म दिनदिनै गरिरहेको छु। संविधानसभा छोडेर, संविधान बनाउने कस्ताकस्ता महत्वपूर्ण मिटिङ छोडेर गरिरहेको छु। तपाईंहरूले मलाई साथ दिइरहनुभएको छ। हा ! हा ! हा !'
'उद्घाटनको सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो?' भित्तेले सोध्यो।
दुई दर्जन पार्टीको सरकार थियो। पाँच दर्जन मन्त्री थिए। दुई सय मन्त्रीसरह खान्की खाने बडानेता थिए। उनीहरू दिनदिनै त्यसैगरी हेलिकप्टरमा उडेर उद्घाटन गर्थे। भित्तेको उपप्रधानले भन्यो, 'देश विकासको प्रमुख सूचक हो उद्घाटनमा प्रमुख व्यक्तिलाई लाइने मालाको वजन।'
'आजको मालाको वजन कति थियो?'
'यो अहिलेसम्मको सबभन्दा वजनदार होइन त?' भित्तेले गद्गद् भएर सोध्यो।
फलामे डन्डीको अन्डाकार चूरोलाई एक हात मोटो फूलैफूलले ढाकेर ठूलो माला बनाएको थियो। मान्छेभन्दा अग्लो र टेवा लाएर ठड्याएको त्यस मालाको बीचमा कार्टून बनेर उभिएको र मुसुक्क हाँसेको भित्ते प्रधानमन्त्रीको तस्बिर भोलिपल्ट छापाको मुख्य समाचार भयो। उसको टोली मालाको छेउमा उभिएर किच्च हाँस्दै आफैंलाई स्याबासी दिइरहेको थियो। हामी पारि पुग्यौं। हेलिकप्टर बाटो लाग्यो। डाक्टरले आमालाई जाँचेर भन्यो, 'क्यान्सर!'
संविधानसभाको चुनाउ भएको दिन आमालाई अस्पताल हुल्नुपर्यो । भित्र अनेक उपचार चले। बाहिर अस्पतालको ढोकामा हामी पोलेको मकै बेचेर र होटेलको भाँडा माझेर गुजारा गर्न लाग्यौं। दुई वर्षमा बिसेक पार्छौँ भन्ने ग्यारेन्टी लिएका थिए । दुई वर्ष बिते। बिसेक भएन। म्याद थप्दै गए। तीन वर्षपछि ठूलो अस्पतालमा लगेर अपरेसन गर्नुपर्छ भने। काठमान्डुको संविधानसभा जत्रो अस्पतालमा लगेर अर्धविचेत अवस्थाकी आमालाई सुताएँ। छ सयको हाराहारीमा एकसेएक डाक्टर, नर्स र सहायक रछन्।
अपरेसन गर्नुभन्दा पहिले आमाले सकीनसकी झिनो स्वरमा भन्नुभो, 'मेरो रोग घाँटीमा छ, प्रभु। रोगले गर्दा म बोल्न नसक्ने भकी छु। मलाई बोल्ने सक्ने बनाइदेऊ। बोली फुकाउने विधान गरिदेऊ।'
मूल डाक्टरले भन्यो, 'रोगी भएर बढी बोल्ने होइन। हामीले जहाँ भन्छौं रोग त्यहीँ हुन्छ। जे भन्छौं रोग त्यही हुन्छ।'
म सानुराजाकहाँ गएँ। उसको गोडामा छाँद हालेर भनेँ, 'प्रभु, म हजुरको शरणमा आएँ।'
atti sundar man chhune lekha ko lagi ghimire ji lai dherai dhanyabad.jasari onha aama lai cancer bhayar pidit hunu bhayo ma pani aama lai cancer bhayara dactor bat pidit bhayaoko thinya.aaphu lai janma dine aama le mero hat samatdai jiban bat bida linda maile kehi abhibhakta garna sakin kin hola?